Indlela yokubhala ingakhuselekanga
Upelo oluchanekileyo oluchanekileyo
Enye yeempazamo ezenziwe ngabafundi kunye nabantu abadala ikufutshane kwaye amagama ahlukeneyo. Umzekelo, amagama ngaphakathi nangaphandle kufuneka abhalwe ngokungqongqo ngokwahlukeneyo. Njengomzekelo (ngeentsuku zeveki) ligama elingaphakathi kwaye kufuneka libhalwe lodwa. Ukunika omnye umzekelo, igama (liphelelwe lixesha) ligama elingaphandle kwaye kufuneka libhalwe ngokwahlukeneyo. Ukufumana uncedo kwisikhokelo sokupela ngaphambi kokubhala inqaku kuya kusithintela ekwenzeni ezo mpazamo.
Kuthetha Ukuthini Ukungakhuselekanga?
Ungayibhala njani ngokungakhuselekanga?
Isikhokelo soPelo esingakhuselekanga
Isenzo esivela kwisenzo